Inona no nozarain'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana tamin'ireo minisitry ny fizahantany afrikanina
Home » Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa » Inona no nozarain'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana tamin'ireo minisitry ny fizahantany afrikanina
Dr. Nedret Emiroglou dia talen'ny areti-mifindra ao amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana any Genève. Tamin'ny Alarobia, dia niresaka tamin'ny latabatra minisitry ny fizahantany minisitry ny fizahantany Afrikanina faharoa izay karakarain'ny ATB Project Hope sy ny Dr. Taleb Rifai, izay mitarika ity hetsika ity izy. Dr. Rifai no sekretera jeneralin'ny World Tourism Organization (UNWTO) teo aloha.
Raha mbola mitohy ny hazakazaka hahita vaksinin'ny COVID-19 azo antoka sy mahomby, iray volana lasa izay, ny firenena afrikanina dia nanao sonia ny fandraisana an-tanana, izay mikendry ny hahazoana farafaharatsiny farafaharatsiny 220 tapitrisa dosie ho an'ny kaontinanta, rehefa nahazoana alalana ary nekena .
Ny firenena 54 rehetra eto amin'ny kaontinanta dia naneho ny fahalianany tamin'ny COVAX, fandraisana andraikitra manerantany izay tarihin'ny Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi), ary ny World Health Organization (WHO).
Import ny zava-dehibe ho an'ny kaontinanta. COVID-19 dia iray amin'ireo fanamby lehibe amin'ny fizahan-tany, na dia firenena sasany atsy Afrika aza dia tsy nahitana afa-tsy tsimokaretina virtoaly tena ambany dia ambany.
Dr. Emiroglou dia nanome topy maso ny zavatra natao sy ny fomba hanombanana ny toe-javatra ho an'ny kaontinanta afrikanina.
Henoy ny fanavaozany: